Nilaza amim-pahadisoana ny fankatoavan’i Jamaika azy ny politisianin’i Kosovo. Fa naninona no tsy nanamarina ny media? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2020 2:47 GMT
Tambatsarin'ny sainam-pirenen'i Kosovo sy Jamaika ary saripika Wikipedia ny ambasadaoron'i Kosovo ao Etazonia Vlora Çitaku, izay bedy tamin'ny fahadisoana.
Nivoaka voalohany tao amin'ny sampam-baovao Meta.mk, tetikasan'ny Orina Mpanasoa Metamorphosis ity zava-notantarain'i Milica Radovanović ity. Navoaka eto ambany ny voatra nohavaozina ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
“Nankatoavin'i Jamaika ny fahaleovantenan'i Kosovo” – nanako aoka izany tao amin'ity firenena kely ao Balkan sy tao amin'ny renim-paritra tamin'ny 20 febroary izany filazana izany. Nientanentana aoka izany ireo manampahefana ambony Kosovara, ary ao anatin'izany ny Filoha Hashim Thaçi, nanambara io vaovao io, mailaka ny media naka izany. Hatramin'ny mason'andro androany, mbola ny atsasaky ny firenena manerantany ihany no mankatoa an'i Kosovo ho manana ny fiandrianam-pireneny.
Saingy tsy misy marina ao anatin'izany. Ora sivy taorian'ny filazana fisian'ny fankatoavana, notsipahan'ny minisitry ny raharaham-bahinin'i Jamaika, Kamina Johnson-Smith, izany.
Hatramin'izao mbola tsy mankatoa an'i Kosovo ho firenena mahaleotena i Jamaika
Notondroin'ny ao amin'ny biraon'ny filoham-pirenena ao Kosovo ny masoivoho misolo tena ny firenena ao Etazonia, Vlora Çitaku, izay nanoratra naoty ho an'ny manampahefana ao an-tanindrazana momba ny fanapahan-kevitra Jamaikana tamin'ny 19 Febroary. Glauk Konjufca, minisitry ny raharaham-bahiny, no miantsoroka ity kaonty ity amin'ny alalan'ny tambajotra sosialiny, nilaza fa nandefa io vaovao io tamin'ny alalan'ny imailaka i Çitaku.
Tamin'ny 4 marsa, notakian'i Konjufca ny filohan'i Kosovo hampody ambasadaoro fito, ka ao anatin'izany i Çitaku, noho ny antony lazaina fa tsy mifandraika amin'ity zava-nanafintohina ity.
Nisioka ny fanesorana azy amin'ny iraka ataony any Etazonia i Çitaku, saingy tsy mbola naneho hevitra tamin'ny raharaha Jamaika.
Androany ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny an'i Repoblikan'i Kosovo niangavy ny Filohan'i Kosovo hampody ahy avy amin'ny iraka maha-ambasadaoro ahy ao Etazonia.
Raharaha manahirana ity isan'ny firenena mankatoa ny fahaleovantenan'i Kosovo ity. Pristina milaza hoe 116 ny isan'ny firenena, fa vitsy kokoa noho izany hoy i Belgrade. Tao anatin'ny taona vitsivitsy i Belgrade navitrika tany amin'ny resaka an-dalantsara handresy lahatra ireo firenena tsy hankatoa an'i Kosovo ho fanjakana manana fiandrianam-pirenena. Nisy firenena sasany efa nanao izany tany aloha no nanatsoaka izany indray, toa an'i Ghana sy i Sierra Leone.
Raha misy ireo mpamakafaka toa an'i Shpetim Gashi nitezitra tamin'ny gafy Jamaika amin'ny “tsy fahamatorana amin'ny politikan'ny raharaham-bahinin'i” Kosovo, manontany kosa ny hafa sao dia tompon'andraikitra amin'izany ihany koa ny media.
Amarino, amarino, amarino
Raha nifampiresaka tamin'i Metamorphosis, nitarika adihevitra i Maja Zivanovic, mpanora-gazety miaraka amin'i Balkan Investigative Reporting Network (BIRN na tambajotran-tatitra fanadihadiana Balkana), fa tokony nanamarina izay nolazain'i Thaçi ny mpanora-gazety mialoha ny itaterana izany — toy ny fitakiana amin'ny governemanta ny taratasy ofisialy na ny fanontaniana amin'ny manampahefanan'i Jamaika.
Nampiany fa raha betsaka ny resadresaka momba ny vaovao faikany ao Balkans, dia ankavitsiana ry zareo no mamaha ny olana fa matetika anie ka ny manampahefana ihany no loharanon'ny fandisoam-baovao. Nilaza izy:
Tokony amim-pahamailoana no amoahana fanambarana iray ataon'ny politisiana iray amin'ny tambajotra sosialy, noho ilay kolontsaina maika hanao fanambaràna sy filazana tsy misy hambahamba, [tahaka ny] fanondroana mazava hoe iza marina no tena namoaka ilay filazana. Tokony atao koa, raha mbola azo atao, ny manamarina ny fahamarinan'ny torohay, indrindra rehefa milaza zavatra efa niteraka fifandirana na tsy fifanarahana izany tany aloha tany, sy ireo torohay tena mahaliana ny vahoaka, tahaka ity iray ity.
Fanampin'izany, nolazainy ihany koa fa ilaina ihany koa ny mpanora-gazety ho afa-mamantatra salovan-tava hosoka ao amin'ny media sosialy, tahaka ireo sasantsasany izay noforonina manokana hampiely fandisoam-baovao.
Nampahatsiahiviny ny raharaha iray lazaina fa fahafatesan'ny mpamono olona an'ady Ratko Mladić, izay mbola mamita ny gadra mandra-pahafaty noho ny heloka an'ady vitan'ny tafika Serba Bosniaka teo ambany fahefany nandritra ny Ady Bosniaka. Nisy Italiana mpanora-gazety iray nanao fanahy iniana nizara ity vaovao noforomporonina ity tao amin'ny Twitter tamin'ny alalan'ny fisolokiana anarana politisiana Bosniaka iray, ary dia nirohotra ny ankamaroan'ny media tao Balkan nitatitra izany tahaka ny hoe marina ilay izy.
Vao niresaka tamin'ny manampahefana misahana ny (fifandraisana amin'ny) gazety ao amin'ny Tribonaly Yôgôslavy. Afaka manamarina fa TSY maty ilay Serba Bosniaka mpamono olona an'ady Ratko Mladić (momba azy raha tsy zatra ny anarany ianao)
30 minitra no lanin'ny mpanamarina zavamisy namantarana ny fanambarana faikany milaza ny fahafatesan'i Mladić. Manohy Ms Zivanovic:
Raha tsotsorina, ny ilaina vitaina dia ny mijery ny lahatsoratra teo aloha nataon'ilay loharanom-baovao hamaritana hoe azo itokisana ve ny nolazainy. Matetika amin'io lafin-javatra iray io dia efa afa-manimbolo ny mety ho fisian'ny fandrika ianao. Matetika ny mpanora-gazetin'ny BIRN mifandray amin'ny tompon'ilay kaonty amin'ny alalan'ny hafatra manokana sady miezaka ny mifandray ihany koa amin'ireo olona tafiditra ao amin'ilay vaovao sy miezaka ny hahazo fanamafisana avy amin'ireo ankolafy hafa.
Tsy mbola namafa ilay fanambaràna diso fankatoavan'i Jamaika ny ankamaroan'ireo manampahefana ao Kosovo — ankoatra ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha Behgjet Pacolli, izay namafa izany sady nisioka indray avy eo hoe: “Na inona na inona dia misaotra anao.”Misaotra anao ry Jamaika na inona zavamisy na inona, misaotra anao ry minisitra @kaminajsmith , misaotra anao ry Etazonia,@RepEliotEngel
Ho namana atokisan'ny governemanta sy ny vahoakan'i Jamaika mandrakizay i Kôsôvô sy ny Kôsôvara